Onye na-ehi ura, onye ozo na caffeine na Amphetamine | Esi m mac
Onye na-ehi ura, ihe ozo diri Caffeine na Amphetamine
Ngwa iji mee ka Mac anyị mụrụ anya, enwere ọtụtụ na m sitere na Mac anyị gosiri gị ụfọdụ n'ime ha, opekata mpe nke kachasị mkpa ma mara dị ka Caffeine na Amphetamine. Nsogbu a, ịkpọ ya n'ụzọ ụfọdụ, na ngwa ndị a na-enye anyị bụ na ọ nweghị nke ọ bụla dị na Mac App Store, nke na-amanye anyị ka anyị budata ha na ịntanetị ma mesoo macOS ka ọ hapụ anyị ka anyị wụnye ha. A na-edozi nke a site na iji ngwa ụra. ngwa nke nyere anyi otu ihe dika Caffeine na Amphetamine, mana nke a di na Mac App Store.
Ọ bụrụ na anyị jiri leepra na Caffeine na Amphetamine tụnyere, anyị nwere ike ịhụ na n'ihi mmachi nke Apple nyere ndị mmepe chọrọ ịre ngwa ha na Mac App Store, nhọrọ dị na ole na ole. Leepra na-enye anyị ohere iji rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ nke ngwa a site na mmanya menu elu site na iji pịa dị mfe. Banyere oge ahụ na-enye anyị ohere ịhọrọ ịchebe Mac anyị ịmụrụ anya, na-esi na 5 nkeji gaa 5 awa, mgbe oge a gasịrị, Mac ga-aga n'ihu dịka nhazi ahụ siri ike, nke ga-ehi ụra.
Banyere nhọrọ nhazi, enwere ike ịchọta obere ma ọ bụ ihe ọ bụla. Dị ka m kwuru n'elu, ịdị na Mac App Store ngwa a bụ ezigbo maka ndị ọrụ ahụ niile na-etinye ngwa ndị dị na Mac App Store ma ọ bụ na ọtụtụ ndị mmepe debara aha Apple. Leepra ụra karịrị 4MB n'ogo, dị na Bekee, ma dakọtara na macOS 10.8. Ọ chọrọ nhazi 64-bit ma ọ dị ugbu a maka nbudata n'efu, ọbụlagodi n'oge ederede a. Ọnụ ego ya bụ euro 0,99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Onye na-ehi ura, ihe ozo diri Caffeine na Amphetamine
Ụlọ Ignatius dijo
Daalụ maka nkọwa.
8x25 Podcast: iPad ọhụrụ na Eprel
Muta ka esi ese foto na vidiyo site na iPad na Mac